Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad UNDERCARRIAGE
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Qashinka Bulldozer Track Link Chain Assy ee Dhamaan Noocyada
Bonovo waxay siisaa isku xidhka isku xidhka wadada isku xidhka ah, silsilad isku xidha oo la saliidaynaya oo loogu talagalay qodista iyo cagaf cagafyada, wadada isku xidhka wadada isku xidha oo u dhaxaysa 90mm ilaa 317mm.
Waxaan isticmaalnay daaweyn kuleyl oo ka sareysa si loo hubiyo adkaanta isku xirnaanta wadada, biinanka iyo baadiyaha sidoo kale waxaa lagu daaweeyay kuleyl heer sare ah oo la demiyay si loo hubiyo cimri dherer xiran.
BONOVO Qaybaha Gawaarida OEM Bulldozer Sprocket Excavator Drive Wheel Sprocket
1. jeexjeexa ayaa ku habboon qodista. Digger, iyo machienry gaar ah.
Tiknoolajiyadda tuurista la arki karo iyo qaabeynta qaab dhismeedka si loo yareeyo isku-buuqa culeyska iyo ka-hortagga cilladda.
3.Independent cilmi baaris iyo daaweynta kuleylka gaarka ah si loo damaanad qaado qallafsanaanta saxda ah oo wax ku ool ah
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Qashin-qubka Rubber Track Rubber Crawler Assembly
Track Rubber wuxuu leeyahay faa'iidooyinka miisaanka fudud, gariirka yar, buuqa hoose, isku dhejinta sare, wanaagsan
La qabsiga, Waxyeello uma geysato Jidhka Waddada, Khayaalihii ugu Fiicanaa ee Beerta. Gaar ahaan Ku Fiican Magaalada Dhismeheeda iyo Shaqada Beeraha.
raadadka caagga ah ee Kobelco, Hyundai, Hitachi, Kubota, Bobcat, Takeuchi oo loogu talagalay qodista, qodista, xamuulka, goostaha, gaari xamuul, cagaf
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Qashin-qubka oo leh Dammaanad 1 sano ah
Excavator, Paver, Cagaf, Makiinado rara, Makiinado aan qodneyn, Mashiinada Grasp, Mashiinka Qodista.
Qaybaha Gawaarida Gawaarida 'BONOVO' Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Bulldozer
Rullaluistemadka raadraaca oo sidoo kale loo yaqaanno rullaluistemadka hoose ama rullaluistemadka hoose waa qayb muhiim ah oo ka hooseeya hoosta gawaarida qodista wiishka ama cagafcagaflayaasha. Waxay xiriir dhow la leeyihiin socodka dhulka, sidaa darteed tayada gawaarida gawaarida ayaa saameyn weyn ku leh waxqabadka qalabka.